टीकापुरमा मारिएका श्रीमानको याद आँखा रसाउछ ! छोराले बुबाको आवश्यकता पर्ने बेला बुबा भन्न पाएनन् - Riddle Nepal
टीकापुर थरूहट आन्दोनका क्रममा मृत्यु हुने सात प्रहरी अधिकारीमध्ये एक थिए, प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा। मृतक केशव बोहराका दुई छोरा र श्रीमती शारदा बोहरा हाल काठमाडौं वनस्थलीस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन्। चौधरीको शपथ ग्रहणपछि हा मी उनलाई भेट्न उनकै निवास वनस्थली पुगेका थियौँ। गोरो वर्ण, मिलेका दाँत। भर्खर ३९ वर्ष पुग्दै गरेकी शारदाको मुहार कालो बादलले छेकेको आकाश जस्तो। कारण टीकापुर घटनामा उनका पतिको मृत्यु। जिन्दगीमा आउने हरेक दु:ख सुखहरूलाई साटासाट गर्ने आफ्ना श्रीमान आज उनीसँग छैनन्।
टीकापुरमा मारिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक बाेहरा टीकापुरमा मारिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक बाेहरा श्रीमानको याद उनका आँखामा आँसु लिएर आँउछ। यो उनको दैनिकी हो र नियति पनि, जुन उनी कहिल्यै चाहन्नथिन्। तर वास्तवित्कता यही बनिदियो उन को जिन्दगीको। ‘दुई छोराले बुबाको आवश्यकता पर्ने बेला बुबा भन्न पाएनन्। त्यो पीडाको अनुभूति हामीबाहेक अरू कसलाई होला र ?’, उनले यसो भन्दै गर्दा उनका आँखाको डिल हुँदै आँसु बगिरहेको थियो। बिहीबार टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीले सांसदको शपथ लिएको कुरा उनले बेलुका मात्रै थाहा पाएकी थिइन्।
‘हामी तीन वर्षदेखि न्यायको खोजीमा थियौँ। अझ प्रहरी संगठनले न्यायका लागि पहल गर्ला भन्ने आश थियो’, शारदाले भनिन्। तर एक्कासि मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई फूल माला लगाएर शपथ ग्रहण गराइयो। शपथबारे प्रहरी संगठनले विज्ञप्तिसमेत निकाल्न सके न। ‘अब के न्यायको आश छ र! सरकार र प्रहरी संगठनबाट’, उनले दुखेसो पोखिन्, ‘हाम्रो अभिभावक जस्तो हो प्रहरी संगठन तर प्रहरी संगठनबाट समेत त्यो अनुभूति पाइएन।’ उनले यही शैलीले न्याय पाऊँला भन्ने आश मरेको तर अन्तिम अवस्थासम्म न्याय का लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने बताइन्।
उनी मात्र होइन, टीकापुर घटनामा ज्यान पुगाउने अन्य प्रहरी अधिकारीका परिवारका पीडा र दुखेसो पनि शारदाका जस्तै छन्। टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाउने अर्का प्रहरी निरीक्षक हुन्, बलराम विष्ट। टीकापुरमा मारिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक बिष्ट टीकापुर मा मारिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक बिष्ट विष्टका तीन छोरी, एक छोरा र श्रीमती छन्। उनीहरू पनि न्याय पाउने आशमा न्यायको बाटो कुरिरहेका थिए तर बिहीबारबाट भने न्याय पाउने आश मरिसकेको विष्टकी श्रीमती मन्धरा विष्टको भनाइ छ। ‘हामी न्यायको आशमा बसिरहेका छौँ, सरकार पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा अपराधीलाई फूलमाला लगाएर जेलमुक्त गर्न खोजिरहेको छ।
अब न्यायको आश हामीले कोबाट गर्ने ?’, उनले भनिन्। टीकापुर घटनामा प्रहरी जवान नेत्रबहादुर साउदका दुई वर्षीय छोरा टेकबहादुर साउदको समेत मृत्यु भएको थियो। उनका बाजे जंगबहादुर साउद सरकारले मान्छे मार्ने अपराधीलाई बचाउन खोजे पनि न्या यालयले न्याय दिनेमा आशावादी रहेको बताउँछन्। ‘सरकारबाट न्याय पाउने आश मर्‍यो, पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा सरकार अपराधी बचाउन लागिपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘यो सरकार जनताका लागि बनेको होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो।’ रेशम चौधरीको बिही बार शपथ ग्रहण भएको थियो।
सभाभुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा दिउँसो ३ बजे शपथ ग्रहण गराएका थिए। उनले थारू भाषामा शपथ लिएका थिए। नेपालको संसदीय इतिहासमा चौधरी शपथ ग्रहणपछि फूलमाला लगाएर संसद भवन होइन, का रागार जाने पहिलो सांसदसमेत बनेका छन्। टीकापुर घटनामा एसससपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना प्रहरी अधिकृतको ज्यान गएको थियो भने नेत्रबहादुर साउदका दुई वर्षीय छोरा टेकबहादुर साउद पनि मारिएका थिए। टीकापुर काण्डमा संलग्न भएको अभियोग मा रेशम चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ।
१९ पुस, काठमाडौं । जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराउनु कानूनसम्मत रहेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । चौधरीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा ल्याएको खण्डमा सपथ ग्रहण गराउन तयार रहेको आफूले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको महराले अनलाइनखबरलाई बताए । सभामुख महराले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘मैले सुरुदेखि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जेलबाट पुलिसले लिएर आउँछ […]
सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपालिबाट एक गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कि डोमा राईको बिहीबार हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो । लामो समयदेखि प्रसव बेथा लागेकी राईलाई घरआगन नामक संस्थाले हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगेको छ । डोमाले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अप्रेशन गरी छोरालाई जन्म दिनुभएको छिमेकी एवम् युवा संघ नेपालका केन्द्रीय […]